प्रधानमन्त्री देउवाको प्रश्नः एमसीसीमा कहाँ छ राष्ट्रघात ? — Breaking News, Headlines & Multimedia
प्रधानमन्त्री देउवाको प्रश्नः एमसीसीमा कहाँ छ राष्ट्रघात ?
कोरपाटी संवाददातापौष ११, २०७८काठमाडौं
११ पुस २०७८, आईतबार
नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालको हितमा रहेको बताएका बताउनुभएको छ ।
आज प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी काठमाडौंमा शुरु भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी राष्ट्रघाती भन्नेलाई उल्टै प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रघाती भन्नेले एमसीसीबारे पढ्या छ कि छैन, त्यो पनि थाहा छैन । पहिले पढ्नुपर्‍यो नि ? एमसीसी, कहाँ छ राष्ट्रघाती ? मैले त कहिँ देखेको छैन । ‘म यो देशको प्रधानमन्त्री हुँ । के म नेपाल राष्ट्रको खिलापमा जाउँला ? म पनि प्रजातन्त्रका लागि लडेको मान्छे हुँ म किन राष्ट्रघात गरौंला ?’
सभापति देउवाले एमसीसीबारे आफूहरु (सत्तारुढ दलहरु)बीच छलफल भइरहेको जनाउनुभयो। ‘प्रचण्डजीसहित अन्य नेताहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एमसीसी नेपालको हितमा छ । सित्तै आएको पैसा हो यो । सित्तै आएको पैसा चाहिन्न भन्छन् ।’
विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंबाट हामी ऋण लिन्छौं, त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून लागू हुन्छ । एमसीसी सित्तै आएको छ, नेपालको कानुन मान्छु भन्या छ, तैपनि मान्दैनन् । राम्रोसँग बुझ्नुपर्‍यो क्या ?’यसको बृहत छलफल भएर सहमतिका आधारमा एमसीसी पारित हुनेमा आफ्नो विश्वास रहेको उहाँले जनाउनुभयो ।